जीवन बिमा ‘बोनस दर’ भनेको के हो? – Insurance Khabar
जीवन बिमा ‘बोनस दर’ भनेको के हो?
प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७४, मंगलवार ०५:१८
काठमाडौँ चैत्र २०: जीवन बीमा कम्पनीहरुले हरेक वर्ष बीमांक रकमको प्रति हजार रुपैयाँ बराबर दिने प्रतिफल नै ‘बोनस दर (Bonus Rate)’ हो । बीमा गर्ने व्यक्तिले यो बोनस बीमा अवधि सकिएपछि एकमुष्ट पाउँछ । यसको हिसाब गर्दा कुल बीमांक रकमलाई हजारले भाग गरेर प्रति हजार रुपैयाँ तोकेको बोनस दर दिइन्छ ।
बोनस दर हरेक वर्ष परिवर्तन हुन सक्छ । कम्पनीले पाउने सबै पुँजी स्रोतमा उसले तिर्न पर्ने दायित्व घटाएर उब्रने रकम (सरप्लस) लाई नै बाँड्ने हो । जीवन बीमा कम्पनीहरुले अहिले हरेक वर्ष एक्चुअरी मूल्यांकन गरेर आफ्नो वास्तविक दायित्व निकाल्छन् । मानौं, यसरी दायित्व देखिएपछि त्यसलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम छुट्याएर १०० रुपैयाँ उब्रन्छ भने त्यो १००रुपैयाँ मध्ये ९० रुपैयाँ बीमितहरुको योजनालाई प्रतिफल (बोनस दर) दिनुपर्छ । बाँकी १० रुपैयाँ सेयर लगानीकर्ताले प्रतिफल (बोनस सेयर वा नगद लाभांश) पाउँने हो।
आफुले जीवन बिमा गरेको कम्पनीले कम्पनीको मुनाफा बाट दिने प्रतिफल नै सोझो अर्थमा बोनस दर हो, कम्पनी का संचालक तथा सेयर धनिले कम्पनीको मुनाफा बाट १० रुपैयाँ पाउन योग्य हुदा बिमितले ९० रुपैयाँ पाउन योग्य हुन्छ । तसर्थ जीवन बिमा बीमा अवधि सकिएपछि एकमुष्ट पाउने लगानीको प्रतिफल हो ।